Etu ị ga - esi nweta Mgbanwe Dijitalụ na Mmekọ Mmetụta | Martech Zone
Ahịa gị na-aghọtakwu, ike, achọ, nghọta, na ihe siri ike. Usoro na usoro nke oge gara aga adabaghị na otu ndị mmadụ si eme mkpebi na dijitalụ na njikọ ụwa taa.
Site na itinye n'ọrụ ndị na-ere ahịa teknụzụ nwere ike isi metụta ụzọ ndị ahịa si ele njem ndị ahịa anya. N'ezie, 34% nke mgbanwe dijitalụ bụ ndị CMO na-eduzi jiri ya tụnyere naanị 19% nke CTO na CIO na-ebute ụzọ.
Maka ndị ahịa, mgbanwe a na-abịa dị ka mma agha ihu abụọ. Site na itinye mgbanwe dijitalụ, CMO nwere ike imetụta obere oge ọ bụla yana njem ndị ahịa. N'aka nke ọzọ, na 70% nke anwa ịgbanwe na otu dara ada, olee otu mgbanwe dijitalụ nke ndị ahịa na-ebute ụzọ ga-esi nwee ihe ịga nke ọma?
Na-ewebata Influ 2.0: Ọdịnihu nke Mgbasa Ọrịa Influencer
Iji nyere gị aka ịchọta ụzọ gị na mpaghara okirikiri a, anyị na-emekọrịta ihe Ahịa TopRank na Brian Solis, Onye isi nyocha, Altimeter Group, ka ha nyochaa ndị na-ere ahịa ahịa sitere na ụlọ ọrụ ndị isi, gụnyere American Express, 3M, Adobe, na Microsoft. Anyị ozi? Iji chọpụta otú omume nke influencer ahịa si agbanwe ma na-enye usoro jikọtara ntụpọ n'etiti "ahịa influencer" nke taa na "mmekọrịta mmekọrịta" nke echi.
Mmetụta 2.0: Ọdịnihu nke luzụ ahịa luzụ ahịa bụ banyere ịchọpụta ụwa nke ndị na-emetụta mmekọrịta - ọzụzụ ọhụrụ nke gafere ahịa niile metụtara mmekọrịta, wuru na ntọala nke mmetụta ọmịiko na ndị ahịa. Nchoputa ohuru a na-achota atumatu nke Influence 2.0, nke jikotara otu ndi mmadu ndi mmadu hapuru ime ka ndi ahia ha bia, obi uto ndi mmadu, na njigide.
Ọ bụ ezie na m ga-agba gị ume ka ị budata akụkọ zuru ezu iji nweta nyocha ị chọrọ iji obi ike jiri ịnyagharịa ala ọhụrụ a, aga m enye gị nghọta nzuzo n'ime isi nghọta atọ dị n'ime akụkọ ahụ.
Akwụpụla ndị nwere Mmemme Mmetụta na Ndị Mmetụta
Otu n'ime nsogbu ndị kachasị emetụta ọdịnihu nke ahịa influencer bụ na a na-ekekarị ya. Nke a na-egbochi mmetụta sitere na nlebara onye isi na irite uru na mbọ mgbanwe mgbanwe dijitalụ. N'otu oge ahụ, anyị mụtara na mgbanwe dijitalụ na mmekọrịta mmekọrịta na-emetụta akụkụ ọ bụla nke azụmahịa.
Anyị chọpụtara na 70% nke mmemme influencer nwere ahịa, ma ọrụ ndị ọzọ, gụnyere ịchọrọ gen, PR, ngwaahịa, na mgbasa ozi mmekọrịta, na-arụsi ọrụ ike na ndị na-eme ihe ike. 80% nke ndị ahịa ahịa kwuru na atọ ma ọ bụ karịa Ngalaba na-arụ ọrụ na ndị na-eme ihe ike, nke pụtara na ọ ga-abụrịrị na ọ ga-abụrịrị na ọ ga - abụrịrị onye na - ahụ maka ọrụ kama ị nwere onye ahịa ahịa. Mmetụta chọrọ otu ndị mmeri gafere ọrụ ndị a dị iche iche iji nweta nlebara anya na njikwa ndị njem na ebe ọ bụla emetụ ha.
Mmekọrịta Influencer Mmetụta nke Mastery nke Ndị Ahịa Njem
Naanị ọkara (54%) nke ndị ahịa erepụtala njem ndị ahịa n'ime afọ gara aga. Obere otutu ulo oru ndi na-achoputa njem a na-enweta uzo di nkpa, ndi ahia nke nwere otutu ihe na-adighi nma karia ndi otu ahia. Nkewa njem dị mkpa maka ụlọ ọrụ iji nweta nghọta na n'ikpeazụ, uru ịsọ mpi.
Ọ bụrụ na ị ga - agbakwunye usoro nkewapụta ndị njem na usoro ịba uru mmekọrịta (IRM), ị ga - achọpụta ọ bụghị naanị isi ihe na - azụ ahịa gị, kamakwa kpughee otu onye ọ bụla si emetụta njem ndị ahịa pụrụ iche. Brian Solis, Onye isi nyocha, Altimeter Group
Chọpụta onye na-emetụta ndị ahịa gị n'oge ọ bụla nke njem ndị ahịa nwere ike inyere gị aka ịchọpụta nke ọma ndị na-emetụta ọtụtụ akara gị. Na mgbakwunye, usoro nkewa ndị ahịa na-ekpughere ndị ọhụụ ọhụụ nke na-emetụta mkpebi na ọkwa dị oke egwu. Usoro nkewa ndị ahịa ga - eme ka ndị na - ere ahịa tụgharịa uche na - agba mbọ itinye aka na ahịa ahịa.
Mụbawanye Mmefu Ego Mmetụta Na-egosi riozọ Mbata Atụmatụ
Ga n'ihu ịbịaru ahịa influencer dị ka ọ dị na mbụ ga-eme ka ị kwụsị ịchịkwa akara gị na ike ịsọ mpi na ụwa ebe ndị ahịa na-achịkwa. Oge erugo ịmalite mmekọrịta mmekọrịta. Ndị ndu ga-eji usoro aghụghọ kwado ndị na - eme ihe ọ bụla na ndị ahịa ọ bụla mana, ha ga - etinyekwa ego na ya Njikọ mmekọrịta mmekọrịta ikpo okwu iji rụọ ọrụ nke ọma ma bulite njikọ aka ogologo oge.
55% nke ahịa a na-atụ anya ka mmefu ego na-abawanye. N'etiti mmefu ego maka ndị ahịa na-eji teknụzụ eme ihe 77% zubere imefu karịa. N'ileghachi anya na chaatị dị n'okpuru ebe a, ọ bịara pụta ngwa ngwa na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmefu ego na-emetụta ihe ga-agbasa na ọnwa ndị na-abịanụ.
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa, ị na-azụ ahịa ndị ahịa. Mgbanwe na-amalite mgbe niile na otu usoro mmefu ego yabụ na ịchọrọ onye mmeri na nzukọ a iji kwuo na anyị ga-anwale nke a wee hụ ihe ga-eme. Philip Sheldrake, Onye Njikwa, Onye Mmekọrịta Euler
Isetịpụ ntọala maka Mmetụta 2.0
Ọ bụ oge gị. Dịka onye na-azụ ahịa, kedu ka ị ga-esi mee ngwa ngwa gbanwee mgbanwe dijitalụ? Site n'ịmụtakwu banyere otu ndị ahịa si eme mkpebi na ihe na-emetụta ha. Were ihe omuma 2.0 nke ihe omuma gi karia ihe omuma ato ato a. Iji nweta usoro iri nwere ike ibido na ịtọ ntọala maka Influence 2.0, budata Mmetụta 2.0: Ọdịnihu nke luzụ ahịa luzụ ahịa. Mụtakwuo maka map nke njem, mgbanwe dijitalụ, na mmetụta taa.
Tags: otu altimitabrian solisnjem ndị ahịaMmetụta 2Mmetụta 2.0Mmetụta 2.0: Ọdịnihu nke luzụ ahịa luzụ ahịainfluencerahịa ahịandị nwe mmemme mmetụtaNjikwa mmekọrịta mmetụtaMRIPhilip Sheldraketraackr